SABC, mutsigiri weCameroon weCastel, achaparadzira 15 mabhiriyoni FCFA kune avo vagovhani vemuchina we 2018 - TELES RELAY
HOME » upfumi SABC, rutivi rweCameroon rweChrisel Group, ruchaparadzira 15 mabhiriyoni FCFA kune vashandi varo vachishandisa basa 2018
(Invest in Cameroon) - The Société Anonyme des Basseries du Cameroun (SABC) yakaita musangano wayo wavose musi weChitatu 15 May 2019 muDouala. Pakati pezvisarudzo zvakapiwa kuvhoti yevashandi vebhizinesi ino yakanyorwa paEuronext Paris kwaive kugoverwa kwe15 mabhiriyoni FCFA semugove wakakwana nokuda kwegore remari ye2018.
IGA yakabvumirana nechisarudzo ichi. Chiito icho vatungamiri vepamusoro ichi chikamu chechiFrench cheboka Castel chinopa semubairo wekushivirira kwevashandi, mushure memazuva akaoma e2016 ne2017.
Matambudziko anosara pasinei nezvose. "Nekutambudzika kweAnglophone uye matambudziko ari kuFar North yenyika, tine kuvhiringidzika pamusoro pe35% yematengesi edu. MuNorth West-West, kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, mapepa edu ekupararira ari kuchinja mumamiriro ezvinhu akaoma uye mukuzvipira kwedu kuti tirambe takasimba mukutarisana nematambudziko aya, takasarudza kusaisa vashandi, asi kuti tishandure 250 kubva kwavari. Tinofara kuti matambudziko aya akaoma akaunza mugumisiro watinayo nhasi. " Emmanuel De Tailly, CEO weboka reSABC, akati.
Paakasvika pamusoro wekambani iyi, mukuru weEEC akazviisa iye chinangwa chekunatsiridza huwandu hwemambure ekutsvaga. Pakupedzisira 2018, SABC yakanyatsofambira mberi pane iyi ichienzaniswa ne2018, ichikwira chiyero che7,6%. Chibereko chiri nani kudarika 6,4% yegore rapfuura. Nayo yebasa rayo muZ2018 yaiva 25,6 mabhiriyoni FCFA kusvika 17% kana ichienzanisa ne 21,9 mabhiriyoni FCFA mu2017. Vakuru vakuru vekambani vanotsanangura kuti zvinogona kuita zviri nani mumamiriro ezvinhu ekuvandudzwa kwenyaya yekushanda.
Imwe yehondo huru dzeboka iri iri mumutero unoshandiswa kwairi. Kutanga kwegore 2019 ndiyo yaiva mugumo wehondo iyi nechinzvimbo chehurumende chakasiyana zvichienderana nematare. MuHurumende yeHurumende, mabhizimisi anotengeswa anotaridzirwa zvakajeka kuti ugadzikane kwehutano hwakadai sedayisi, shuga kana hove. Apo Hurumende Yezvemari inoronga zvigadzirwa zvemakambani ekuchera muboka rekushandiswa kwepamusoro uye kushandiswa kwemitero inoshandiswa inowedzera kuwedzera.
Munharaunda iyi yehupfumi mukati mehutungamiri hwehurumende, mutoro wemutero weSABC wakasimuka kusvika ne58,7% pamagumo 2018, zvisingapindi pasi pe40% makore mana akapfuura. Saka boka racho rinotarisira gore rakaoma re2019. Asi ane chivimbo chokuti zvinhu zvinofanira kugadzikana. Anoti anoda kutenderera pane zvese zvitsva zvekutsvaga zvatoitwa uye hutungamiri hutsva hunoiswa panzvimbo, kuti hurambe huchiwana zvikwereti zvemisika, kunyanya pakutengesa kwemvura.
Abdul Samad Rabiu, CEO weB BUA boka: "Mu cement, kudzoka kwekutsvaga kwekutsvaga kunoshamisa" - JeuneAfrique.com